Kenya Oo Ka Quusatay Rajadii Ay Ka Qabtay Xukunka Maxkamada ICJ. – Xeernews24
Kenya Oo Ka Quusatay Rajadii Ay Ka Qabtay Xukunka Maxkamada ICJ.
21. Juli 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
wargeyska ugu afka dheer Kenya ee Daily Nation ayaa faallo uu qoray kaga hadlay heerka ay la eg tahay rajada Kenya ay ka qabto inay ku guuleysato kiiska maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee ku saabsan badda Soomaaliya.
Faallada ayaa lagu sheegay in Kenya rajadeeda ay aad u liidato sababtuna ay tahay in dhammaan xeerarka caalamiga ah iyo kiisaskii hore ee noocan oo kale ah ay muujinayaan in Soomaaliya ay ku taagan tahay waddada saxda ah, waxaana Wargeyska uu yiri “Kenya aad ayey u nasiib badnaan dontaa haddii ay kiiskan ku guuleysato”.
Marka ay la go’aaminayo muran xuduud badeedka ee dalalka u dhaxeeya, waxaa la eegaa laba xeer oo kala ah, The Equidistance Principle and Equitable Principles [Mabda’a Masaafada Isku midka ah iyo Mabda’a Dhex-dhexaadka].
Midka Equidistance ama Masaafada Isku Midka ah, wuxuu leeyahay “xuduudda badeed ee laba dal waa inay waafqadaa xariiqda labada dal u dhaxeysa ee dhinaca dhulka islamarkaana masaafo isku mid ah u jirta labad dhinac ee labada xeeb.”
Mabda’aan koowaad waa kan uu taageerayo Xeerka QM ee Badaha ee 1973. Markii la ansixinayey waxaa aqbal dhammaan dalalka caalamka marka laga reebo Kenya iyo toddoba kale oo kasoo horjeestay.
Kenya ayaa doorbidaysa kan labaad Equitable Principle [Mabda’ Dhex-dhexaadka]. Xeerakna ayaa la adeegsadaa marka la rumeysan yahay in midka koowaad inkasta oo uu sax yahay haddana uu aad u xanuun badan yahay islamarkaana uusan ixsaan u sameeneyn dhinaca laga gar leeyahay. Haddii aan si kale u niraahno waa waxa aan Soomaaliga ku dhaho “xeer jajab”. Si fudud, Kenya waxay dooneysaa in la yiraahdo waa lagaa gar leeyahay balse wax un ayaan kuu ogolaaneynaa.
Sababta Kenya u diidan tahay The Equidistance Principle ama xeerka masaafad isku midka ayaa ah inay rumeysan tahay in dhul badeedkeeda markii horeba uu yaraa, halka Soomaaliya ay haysato xeebta labaad ee ugu dheer Afrika, sidaas darteedna uu xeerkan aad u ciqaabayo ayada.
Nasiib-darro, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa inta badan wax ku go’aamisa xeerka Kenya kasoo horjeedo, waana taas sababta ay Kenya dagaal xooggan ugu jiro in kiiskan lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda.
10-kii October 2002, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go’aan ka gaartay muran u dhaxeeyey Cameroon iyo Nigeria, oo ku saabsanaa cidda leh Jasiirad u-yaalka Bakassi. Maxkamadda ayaa garta siisay Cameroon ayada oo adeegsaneysa Xeerka Masaafada Isku midka ah.
Kenya waxaa bad-baadin kara oo kaliya nasib cirka uga yimaada iyo garsorayaasha maxkamadda oo isku wada raaca caddaalad darro ka dhan ah Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/kk-620x330.jpg 330 620 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-21 08:59:572019-07-21 08:59:57Kenya Oo Ka Quusatay Rajadii Ay Ka Qabtay Xukunka Maxkamada ICJ.
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaalia Oo Hargeysa Ka Yidhi Gaadhi meel iska taagan... Milateriga Fransiiska oo soo bandhigay qalab casri ah oo dunida ku cusub.